China Piperonyl Butoxide factory sy mpamatsy | Lemandou
Piperonyl butoxide dia synergista famonoana bibikely malaza, ankoatry ny am-polony hanatsarana ny vokatra famonoana bibikely dia mety hanitatra koa ny fotoana fampiasana, hampitomboana ny fihanaky ny bibikely. Ny Piperonyl butyl ether dia be mpampiasa amin'ny fambolena, ny fahasalaman'ny ankohonana ary ny famonoana bibikely, dia ny fikambanan'ny fahasalamana mikambana ao amin'ny Firenena Mikambana nankatoavina ho an'ny fahasalaman'ny sakafo (famokarana sakafo) amin'ny famonoana bibikely synergistic mahomby indrindra.
Anaran'ny index Sanda fanondroana
Votoatiny (%) ≥95.00
Haavo havana 1.0400-1.0700
Fanondroana ref 1.4850-1.5100
Votoatin'ny rano (%) ≤0.2
Bika Aman 'endrika Rano mavo somary mavo
Asidra (%) 0,15
Nampiasaina ho mpitsabo synergista famonoana bibikely
Natao hamonoana bibikely novokarina nandritra ny fitahirizana voamadinika toy ny vary, varimbazaha ary tsaramaso
Matetika izy io dia ampiasaina miaraka amin'ny pyrethroid amin'ny bibikely hamorona endrika sarotra synergistic
Ity vokatra ity dia afaka manatsara ny asan'ny bibikely amin'ny pyrethroid sy ny bibikely pyrethroid rotenone ary ny bibikely karbamate
Inona ny piperonyl butoxide (PBO)?
Piperonyl butoxide (PBO) dia siniterista famonoana bibikely nataon'olombelona. Izy irery dia tsy natao hanimba bibikely ny PBO. Fa kosa, miara-miasa amin'ireo mpamono bibikely izy mba hampitomboana ny fahombiazan'izy ireo. Ny PBO dia matetika ampiarahina amin'ny pyrethrins voajanahary na pyrethroid noforonin'olombelona. Nampiasaina tamin'ny vokatra famonoana bibikely hatramin'ny taona 1950 izy io, fony izy io no nisoratra anarana voalohany tany Etazonia.
Inona avy ireo vokatra sasany izay misy piperonyl butoxide (PBO)?
Betsaka ny vokatra famonoana bibikely 2.500 izay misy ny akora PBO. Anisan'izany ny zavona, vovoka ary tsifotra. Ny sasany amin'ireto vokatra ireto dia azo ampiasaina ao an-trano sy ivelan'ny trano. Ny PBO koa dia ampiasaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny fampiasana hafa dia misy ny fandaharana mifehy ny moka sy ny parasy ary ny fitsaboana ny biby fiompy.
Misy vokatra koka any an-doha misy PBO ary mety ampiharina amin'ny olona ho menaka fanosotra na shampoos. Ny sampan-draharahan'ny sakafo sy zava-mahadomelina any Etazonia dia mifehy ny vokatra ampiasaina hifehezana ny koka amin'ny olona. Ireo vokatra ireo dia tsy heverina ho fanafody famonoana bibikely.
Araho hatrany ny torolàlana momba ny marika ary manaova dingana hisorohana ny fipoahana. Raha misy ny fampirantiana dia alao antoka fa araho tsara ireo torolàlana momba ny fanampiana voalohany amin'ny marika momba ny vokatra.
Ahoana ny fiasan'ny piperonyl butoxide (PBO)?
PBO tsy natao hamonoana bibikely irery. Ny bibikely dia manana anzima ao amin'ny vatany izay mamotika bibikely sasany. Ny PBO dia mampiato ny sasany amin'ireo anzima ireo ary mamela ny bibikely hamela fotoana hiasa bebe kokoa. Midika izany fa ny bibikely dia tsy dia sitrana amin'ny fitambaran'ny PBO sy ny bibikely sasany.
Ny fandinihana voalohany dia nahatsikaritra fa ny PBO dia nanatsara be ny famonoan'ny pyrethrins ny felam-borona. Ny PBO mihitsy tsy namono ny lalitra. Ny fitambaran'izy roa dia namela fanaraha-maso bebe kokoa amin'ny pyrethrins kely kokoa.
Ahoana no mety hahatafiditra ahy amin'ny piperonyl butoxide (PBO)?
Mety ho tratry ny fofonaina PBO ianao amin'ny fofonaina azy, ny fihinanana azy, ny fikasihanao azy, na ny fijerinao azy. Mety hitranga izany rehefa mametraka tsifotra na vovoka ao an-trano na any ivelany. Aza mikasika ny faritra lena na mifoka zavona na vovoka famonoana bibikely. Mety hampiharihary koa ianao raha misakafo, mifoka, na mampiasa trano fidiovana nefa tsy manasa tanana aorian'ny famonoana bibikely. Ny PBO dia voasoratra anarana ihany koa mba hampiasaina amin'ny alika sy saka rehetra amin'ny fitsaboana parasy sy tapakila. Mety ho sarona ny olona rehefa mitsabo ny biby fiompy na mikasika biby fiompy vao notsaboina.
PBO kely dia mety misy toy ny residue hita amin'ny sakafo. PBO dia nekena hampiasaina amin'ny vokatra maro alohan'ny hijinja. Tsy misy fetran'ny fetra farany (fandeferana) faran'izay betsaka. Ny sakafo sasany dia azo tsaboina amin'ny PBO aorian'ny fijinjana, ao anatin'izany ny amandy, voatabia, varimbazaha ary hena biby.
Previous: Gibberellic Acid (GA3)
Manaraka: Metarhizium Anisopliae